Zikhona yini amathuluzi esofthiwe ewusizo wama-Amazon wegama elingukhiye labaqalayo?
Seyayaziwa kakade ukuthi ukusingatha ucwaningo lwamagama angukhiye olufanele kungaphakathi kwezingxenye eziyinhloko ze-Search Engine Optimization (SEO) nomqondo wanamuhla wokumaketha kwe-Digital kanye nebhizinisi lonke le-Ecommerce, empeleni ukunganaki lapho uthengisa khona kude kangaka. Amanye ama-SEO achwepheshe athi "okuqukethwe kunenkosi. "Futhi lokho kunengqondo hhayi kuphela ekusetshenzisweni kokusesha okuqala kwizinjini ezinkulu ezifana ne-Google ngokwayo, kodwa kubhizinisi lokuthumela phansi-noma cishe iyiphi iphrojekthi e-intanethi esebenzelana nokuthengiswa kwe-intanethi, njenge-Amazon - canadian dedicated server hosting. Futhi ake sibhekane nakho - kufanele kube ngaphandle kombuzo ukuthi abathengisi abaqala kuqala ku-Amazon badinga isofthiwe yegama eliyinhloko ngaphezu kwakho konke.
Futhi hhayi nje ukuhlala ngaphandle kwabaphikisi be-niche bese uqala ukwakha idumela labo negunya njengabadayisi abaphumelelayo ukuthenga nge. Into yukuthi akekho ongakwazi ukuhlala kulowo mkhakha wokuncintisana wemakethe ngempela, ngaphandle kokuba uxhaswe nge-software efanele yegama elingukhiye lama-Amazon, abasizi bokulandelela namathuluzi okuthenga ukugcina uhlu lomkhiqizo lubuyekeziwe. Ekugcineni - ukunqoba ibhokisi lokuthenga futhi uhlale phakathi kwezinto ezivelele ezihlinzekwe ukudayiswa ngaphesheya.
Ngakho-ke, ucabangela ukuthi ukucwaninga kwegama elingukhiye ngokwayo, kanye nokusikisela okubalulekile kokuncintisana kakhudlwana, empeleni kuyisidingo esibucayi kunanoma yiluphi uhlobo lokunethezeka, nansi amanye izindlela ezingavamile zokukhetha kulula kepha okwenza ama-software ewusizo ama-software ewusizo wase-Amazon ngempela. Ngethemba ukuthi uzothola i-kickstart enhle nabo, ngaphandle kokuchitha imali, njengoba amathuluzi we-software ewusizo we-Amazon elandelayo ngalinye atholakala ekuvuleleni okuvulekile kuwebhu, noma okungenani inguqulo yabo eyisisekelo.
I-Google AdWords I-Keyword Planner
Ingase ibonakale ingenayo i-no-brainer, kodwa leli thuluzi eliyisisekelo elisetshenziselwa ukwabelana kwengonyama lala ma-SEOs esikoleni esidala kungase kukhonjwe ngisho nabathengisi be-novice e-Amazon njengegama elingukhiye isofthiwe esebenza ngempela. Into yokuthi lesi sisombululo esiyisisekelo sikhulu kakhulu ikakhulukazi kubaqalayo. Ngokuyinhloko ngoba le thuluzi elizenzakalelayo le-giant search giant lihle kakhulu ekunikeni isithombe esikhulu esibonisa yonke imigomo yakho yokusesha kanye nomsila omude omdala, izinga labo lamanje lomncintiswano (ngaphandle kwalokho, ukuthi kunzima kanjani lawa magama angukhiye okumele athole) , kanye nemilinganiso yokusesha ejwayelekile yegama lakho eliyinhloko lamagama angukhiye. Futhi asikho isidingo sokuthi idatha ehlinzekwe yi-Google kufanele ibe yilapho ebanzi futhi ejulile kakhulu, ihanjiswa ndawonye hhayi kuphela emakethe eyodwa (njenge-Amazon, eBay, i-Walmart, njll.), kodwa kubuthwe kuzo zonke izinkomba zokusesha ezikhona kwi-intanethi.
Nansi uhlu olufushane lwezinzuzo eziyinhloko ezihlinzekwa i-Google Name Keyword Planner uma zisetshenziselwa isofthiwe yokucwaninga ngegama elingukhiye le-Amazon:
Cabanga ukuthola uhlu lwakho lomkhiqizo lubekwe ngegama elingukhiye elisha noma inhlanganisela yokusesha ende. Vele ufake i-niche ehlobene, noma yiliphi ibinzana lesimo, isigaba somkhiqizo, iwebhusayithi, noma umakhi - futhi usuqedile.
Yiba nomfanekiso omkhulu wevolumu yokusesha kunoma yiliphi amagama angukhiye athile womkhiqizo noma okungawinawo okuncintisayo kokusesha okusetshenziselwa abasebenzisi bukhoma kuwo wonke umhlaba.
Hlanganisa uhlu lwakho oluyinhloko lwamagama angukhiye asemqoka futhi ahlose kahle kakade ngokuthola ukuqonda okubaluleke kakhulu kanye nokusikisela okubalulekile kwegama elingukhiye.Futhi ungakhohlwa ukuthi uMhleli wegama elingukhiye le-Google uyithuba langempela le-goldmine ukukhomba masinyane amagama akho angukhiye athile athembise indawo (i. e. , idolobha, izwe, nezwe).
Igama elingukhiye le-Spy Research Tool
Ngokungafani namanye amathuluzi we-software ewusizo we-Amazon elingukhiye, leli thuluzi lonke lihlose ukukunikeza ukuqonda okucacile kwegama elingukhiye - kuthathwe ngokuqondile kusuka kubanikazi bakho be-niche , noma iqoqwe kusuka kulabo abaphumelela kakhulu ukuthengisa kwenye indawo kwiWebhu. Njengoba kokubili okuyisisekelo mahhala futhi ukhokhele full-fat version, Igama elingukhiye Spy yisisombululo esihle ngempela kubathengisi abaqalayo ukulinganisa ngokushesha ivolumu yosesho kwanoma yiliphi igama elingukhiye, ngokuhambisana nokunika iphakethe elikhulu lokuhlanganisa okuhlobene nokuphakamisa konke umsila omude inhlanganisela (ngezinketho zegama le-LSI elingukhiye) okunconywa ukuba ulinganisele.
Ithuluzi legama elingukhiye le-Srrush
Loluhlaka lwe-SEO lwangempela lusetshenzisiwe, olungaba yisinye isixazululo esilandelayo uma sikhetha ukukhetha ilungelo I-software yegama elingukhiye le-Amazon. Phakathi kwezinhlangothi zalo eziqine kakhulu, lezi zici ezilandelayo zocwaningo olunzulu lwegama eliyisihluthulelo zivele zenze kahle kahle: zibeka ubunzima bokulinganisa kunoma yiliphi igama elingukhiye, ukuhlolwa kwevolumu yosesho yenyanga, ukuphathwa kwezikhangiso ze-PPC, ucwaningo lokuncintisana nokuhlaziywa kwezinto ezihamba phambili emakethe yakho.
Lesi sihloko esizichazayo igama lesikhulumi sesofthiwe ye-keyword ewusizo kakhulu e-Amazon. Yebo, Ithuluzi elingamagama ayisihluthulelo alisizi eliyisihluthulelo elilodwa elingamagama angukhiye, kepha wonke amapulatifomu e-intanethi enikeza inguqulo yamahhala yamahhala etholakalayo kuma-novice abathengisi be-Amazon ukuthola amagama angukhiye okwenza phezulu kanye nemishwana yokusesha imilenze yohlu lwahlu lwazo lomkhiqizo. Kodwa-ke, phawula ukuthi ukuze uthole ezinye izici ezithuthukisiwe futhi ezikhohlisayo zalesi sigaba, abathengisi abanokuhlangenwe nakho abanengi abanokuthengisa e-Amazon kuzodingeka bakhokhele inguqulo yayo ethuthukile eyaziwa ngokuthi i-Keyword Tool Pro.
KwFinder Ithuluzi Lokucwaninga
KwFinder iyithuluzi lesofthiwe yegama elingukhiye le-Amazon engingathanda ukukubonisa namuhla. Lolu khetho lungakufanisa kangcono uma kuziwa ekukhiqizeni izixuku zamagama angukhiye amakhulu omsila kanye nemishwana yokusesha yemikhiqizo etholakala ukuthandwa phakathi kwabathengi bukhoma kuze kube manje. I-KwFinder iyasiza ngokulinganayo nge-Amazon kuphela, kodwa wonke amapulatifomu evelele e-ecommerce (njenge-eBay, i-Walmart, i-Alibaba esitolo, njll.), kanye nezinye, ngisho nezindawo ezingathengisi, njenge-YouTube video hosting service, iwebhusayithi yesibili evakashelwe kakhulu. Ngemuva kwalokho, ngithole i-KwFinder ibuye izuze ngokwengeziwe, ikakhulukazi ngezici eziningana ezifana nenqubo yakhe elula yokukhetha ikhophi yokuhambisa izinhlu zami ngokushesha, nezinye iziphakamiso ezingasetshenzisiwe kakhulu ezisuka kwi-semantic indexing eseduzane, iqoqo lezinto ezihlobene nosizo imibuzo yegama ngalinye elingukhiye elidingekayo, kanye nobunzima bayo obunokwenzeka.